ओलीको कुन सन्देशले रोक्यो खनाल-नेपाल समूहको सांसद पदबाट राजीनामा ? खबरमञ्च
२९ बैशाख, खबरमञ्च, at 7:00 AM
By खबर मञ्च / May 12, 2021 / Comments Off on ओलीको कुन सन्देशले रोक्यो खनाल-नेपाल समूहको सांसद पदबाट राजीनामा ?
पौडेलसँगको छलफल सकिनुअघि प्रधानमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘केही समस्या भए आउनुस् छलफल गरौं’ भन्दै आह्वान गरेका थिए। ‘नेकपा एमाले संसदीय दलका सबै माननीय सदस्यहरूलाई अवगत नै छ, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आज दिनको १ बजेबाट प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन र बैठक बस्दैछ।
त्यस प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्न दलका तर्फबाट जानकारी गराइएको छ। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक मतभेद वा असन्तुष्टि केही भए आपसी छलफलबाट समाधान गर्न सकिने नै छ। तसर्थ हतारोमा कुनै पनि अनुचित निर्णयमा जान वाञ्छनीय नहुने कुरामा म सबै माननीयज्यूहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। आउनुस्, केही समस्या भए सँगै बसौं, छलफल गरौं र समाधान गरौं’, ओलीले भनेका थिए।
Last Modified: May 12, 2021 @ 1:13 pm
आत्मसमर्पण गर्दैनौंः घनश्याम भुसाल